Olee otú iji tọghata WMV ka QuickTime
> Resource> QuickTime> Olee otú iji tọghata WMV ka QuickTime na Windows ma ọ bụ Mac OS X Odum
Ọ bụ a nkịtị ọnọdụ na mgbe adọkpụpụta gị WMV faịlụ ma ibudatara Internet ma ọ bụ na-akọrọ ndị ọzọ na ndị nwere PC ka QuickTime maka playback ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ị ga-asian WMV bụ na a format na QuickTime ọkpụkpọ aghọta.
Ee, QuickTime naanị natively akwado ole na ole video codecs dị ka H.264 na MPEG-4, nke WMV faịlụ na-adịghị na koodu na. N'ezie, ị nwekwara ike iji codec components ịgbatị QuickTime mbubata ma ọ bụ na-egwu a dịgasị iche iche nke ọzọ media formats dị ka WMV. Otú ọ dị, ị chọrọ ịkwụ ụgwọ ihe $29.00 maka WMV playback na QuickTime, ma ọ dịghị WMV management na iTunes, na ọ dịghị mmekọrịta ka iPad wdg
Ebe a, m ike ikwu na ị ụzọ ọzọ. Dị nnọọ tọghata WMV ka QuickTime iji a dị ike ma dị mfe na-eji ngwá ọrụ: Wondershare Video Ntụgharị maka Mac. Ọ bụghị nanị na-enye gị ikike iji aka WMV ka QuickTime akakabarede, kamakwa tọghata WMV ihe na-ewu ewu formats na ala na arụmọrụ nke mere na ị pụrụ ime ka jupụtara ojiji nke WMV.
Site n'enyemaka nke a WMV ka QuickTime Ntụgharị, ị na-adịghị na-a Pro banyere ike na-aghọta video codec ihe ọmụma. N'ihi na Mac ọrụ, dị nnọọ eso nke a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi ebe a iji mezuo WMV ka QuickTime akakabarede na ihe ọ bụla Mac-agba ọsọ Mountain Odum, odum wdg
Nzọụkwụ 1. Import WMV faịlụ ka a WMV ka QuickTime Ntụgharị Mac
Mgbe wụnye na-agba ọsọ a WMV ka QuickTime Video Ntụgharị maka Mac, i kwesịrị mbubata gị WMV faịlụ. Nke a smart ngwa na-enye gị abụọ dị iche iche nhọrọ ime nke a. Ị nwere ike ịhọrọ onye ọ bụla n'ime.
1.Go ka "File"> "Ibu Ibu Media Files" iji mara na WMV faịlụ.
2.Directly ịdọrọ otu ma ọ bụ karịa WMV faịlụ a usoro.
Nzọụkwụ 2. Họrọ otu mmepụta format
Dị ka ihe niile mara, QuickTime Movies bụ tumadi na MOV usoro. Ya mere ebe a, anyị nwere ike họrọ MOV dị ka mmepụta usoro. Mepee format mmapụta ndepụta ma họrọ MOV na "Video" nhọrọ. N'ezie, i nwekwara ike ịtọ video mkpebi, ụba ọnụego, Bit Rate na Usoro wdg site na ịpị "Mwube".
Lee Ọzọkwa: Olee otú iji tọghata WMV ka MOV na Windows ma ọ bụ Mac
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie gị videos tupu akakabarede, ị pụrụ ime ka jupụtara eji nke a ngwa si ịtụnanya edezi ọrụ.
Trimming: Isetịpụ mmalite na ọgwụgwụ oge, ị nwere ike ewepụtụ ọ bụla gị chọrọ video clip. Cropping: ịdọrọ akụkụ anọ window iji họrọ gị chọrọ video ebe. Video ukpụhọde: ịgbanwe ihie, iche, saturation na olu. Ọbụna mee ka gị video ọzọ ahaziri site na-agbakwụnye mmetụta dị ka Gray, Old Nkiri wdg
Nzọụkwụ 3. Malite WMV ka QuickTime Mac akakabarede
Mgbe e mere ihe nile, ị dị nnọọ mkpa kụrụ "tọghata" iji tọghata WMV ka QuickTime Mac (Mountain Odum, odum gụnyere). Mgbe akakabarede, ị ga-anya na-ahụ na ị nwere ike ịdọrọ mmepụta faịlụ ka QuickTime maka playback enweghị ihe ọ bụla nsogbu.
Olee Otú M Pụrụ tọghata Kwunyere Site GoToMeeting?
Olee Otú M Pụrụ playback Kwunyere Site GoToMeeting On My Mac?
QuickTime-adịghị arụ ọrụ na OS X Mavericks?